Hadaad Arki Jirtay Quraan Qoon Lagu Akhriyo, Qabso Quraan Qof Qamraysan Lagu Akhriyey! – Rasaasa News
Apr 6, 2012 Hadaad Arki Jirtay Quraan Qoon Lagu Akhriyo, Qabso Quraan Qof Qamraysan Lagu Akhriyey!
April 6, 2012 [ras] – Cudurada dhaqanka, oo ku badan dadka ku nool dunida saddexaad ruuxa ay ku dhacaan lama geeyo Isbitaal, lama tuso dhakhtar caafimaad oo baadha xanuunka haya.
Waxaa yaab leh in dad badan ay ka bogsadaan xanuunka haya, kolka loo geeyo dhakhaatiirta cudurada dhaqanka, kuwaas oo siyaabo kala duwan u
daaweeya dadka qaba xanuunka cudurada dhaqanka.
Cudurada dhaqanka oo leh boqolaal nooc, ayaa waxay aad ugu badan yihiin haweenka iyo caruurta, oo ah dadka ugu nugul bulshada. Noocyada loo yaqaan cudurada dhaqanka qaarkood waa; Qoon, Fal, Il, Ardooyin, Saar, Boorane,Rooxaan iyo Jin.
Cudurada dhaqanka oo dadka daweeya ay isugu jiraan lab iyo dhadig, waxay ku daweeyaan waxyaabo la isku dar daray oo noqda shay kale oo leh dhadhan aan wanaagsanayn, ur xun iyo midab xun oo was waas galin kara dadka.
Waxaa kale oo lagu daweeyaa waxyaabo la isku daray oo laga keeno xoolaha iyo geeedaha, oo iyana marka la isu geeyo noqda wax laga wiswiso.
Dadka daaweeya cudurada dhaqan magacyadooda waxaa ka mid ah; wadaad, Jin-bixiye, Jin-bixiso, Aleeley, wax arag,wax sheeg, faal-yaqaan iyo Rooxaani.
Cudurada dhaqanka ee ku dhaca caruurta, waxaa ugu badan waa xanuunaka ay keento nafaqa daradu. Cudurada dhaqanka ee ku dhaca haweenka waxaa ugu badan ee keena waa xanuunka ka yimaada masayrka.
Dadka daweeya cudurada dhaqanku kuma guulaystaan daaweynta xanuunka inta badan, marka laga reebo in yar oo isticmaasha cilmi nafsi kooban.
Waxaa kale oo jirta daaweeyn ay isticmaalaan dadka Islamku, iyaga oo isku daweeya Quraanka Kariimka ah, kaas oo ay diinnta islaamku meelo badan quraanka ku sheegtay dawadiisa.
Dadka Qurbaha jooga ah ee Somalida, ayaa in mudo ah waxay ka raysteen masayrkii iyo nafaqo daradii waxayna iloobeen cuduradii dhaqanka.
Waxaan baryahan dambe aad ugu soo badanaya Somalida Qurbaha, cabida khamriga, xashiishada iyo noocyo kale oo balwadeed, kuwaas oo sababa xanuuno gala dhiiga, ka dibna dhaawaca maskaxda.
Waxaa badan baryahan dadka Somalida ah, ee la tacaalaya dadka balwada leh. Waxaad arkaysaa dad xanuunkodu xashiishad yahay oo culimo quraan ku akhrida loo gaynayo. Waxaa kale oo loo geeyaa dadka daaweeya cudurada dhanka, iyaga oo ehelku ay ku bixinayaan kharaj xoog leh.
Dadka cuna xashiishada ee la il daran xanuunka xashiishada dawadoodu waa in ay helaan xashiishad ay cunaan ama waa in Isbitaal la dhigo oo dhiigooda laga sifeeyo xashiishada. Wixii kale ee kharaj ah ee lagu bixiyo waxba kama keenayo, waa sida ilmo nafaqo daro hayso oo caloosha laga gubay ama haweenay masayrsan oo malmal la cabsiiyeyey.